Nnwom 29 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ahoɔden wɔ Yehowa nne mu
Monhyɛ ntaade kronkron nkotow no (2)
“Anuonyam Nyankopɔn no nne bobom sɛ aprannaa” (3)
Yehowa bɛma ne nkurɔfo ahoɔden (11)
Dawid dwom. 29 Akatakyi mma, momfa Yehowa nidi mma no;Yehowa anuonyam ne n’ahoɔden nti, momfa nidi mma no.+ 2 Momfa anuonyam a ɛfata Yehowa din mma no; Monhyɛ ntaade kronkron mfa nkotow* Yehowa.* 3 Yɛte Yehowa nne fi nsu so;Anuonyam Nyankopɔn no nne bobom sɛ aprannaa.+ Yehowa di nsu pii so.+ 4 Ahoɔden wɔ Yehowa nne mu;+Yehowa nne wɔ anuonyam. 5 Yehowa nne bubu sida nnua;Ampa, Yehowa bubu sida a efi Lebanon mu asinasin.+ 6 Ɔma Lebanon* huruhuruw sɛ nantwi ba,Na ɔma Sirion+ huruhuruw sɛ ɛkoɔ* ba. 7 Yehowa nne pa ogyaframa;+ 8 Yehowa nne ma sare so asaase wosow,+Yehowa ma Kades+ sare so asaase wosow. 9 Yehowa nne ma awo ka ɔwansan mpofirim ma ɔwo;Ɛma kwae mu nnua yɛ pasaa.+ Na obiara ka wɔ n’asɔrefi hɔ sɛ: “Anuonyam nka no!” 10 Yehowa te nsu a eyiri* so;+Yehowa bɛyɛ Ɔhene wɔ hɔ daa.+ 11 Yehowa bɛma ne nkurɔfo ahoɔden.+ Yehowa de asomdwoe behyira ne nkurɔfo.+
^ Anaa “nsom.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Yehowa anuonyam kronkron nti, monkotow no.”
^ Anaa “ɛpo a ɛwɔ wim.”